IZIPHO EZINGAMA-27 ZESIKHUMBUZO SONYAKA SAWO NAWUPHI NA UMHLOBO WAKHO - IZIPHO
Eyona Izipho Izipho eziGqwesileyo zokuKhumbuza uMntu oSebenzisana Naye kulo nyaka
Izipho eziGqwesileyo zokuKhumbuza uMntu oSebenzisana Naye kulo nyaka
Thenga izipho zoyilo ngalo lonke ixesha elibalulekileyo. IGorodenkoff / iShutterstock
Ngaphambi kokujoyina i-Knot Worldwide, uEmily wabhalela uMartin Stewart Weddings
Ukuhlaziywa kwe-Aug 21, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Uyalithanda iqabane lakho, kodwa awuthandi uxinzelelo malunga nokuba uza kumfumanela ntoni ngesikhumbuzo sakho. Ewe, qwalasela i-Knot umncedisi wakho omtsha wokuthenga. Emva kweminyaka yokuthenga kwethu yeyakho I-SOS, silapha ukukunceda ufumane isipho esifanelekileyo nabuphi na ubuhlobo . Ngokuphathelele kwizipho ezikolu luhlu? Zonke ziintsimbi eziqinisekisiweyo. Nokuba usondela kumqondiso wonyaka omnye okanye uthathe iihambo ezimbalwa ujikeleze ilanga kunye, sinezimvo ezininzi. Lungiselela ukweba intliziyo yakhe kwakhona ngesinye sezipho zokukhumbula isoka lakho.
Izipho ezithandekayo zaMatye aBalulekileyo
Izipho zoyilo zawo nawuphi na unyaka wesikhumbuzo
Ukhubekile kwinto oyinika isithandwa sakho kwisikhumbuzo esikhethekileyo? Nika imbeko kwesi sahluko sitsha ebomini bakho ngesipho esithile sonyaka. Ezi zipho zizame-kwaye ziyinyani zibhiyozela ezona zinto zibalulekileyo ngeendlela ezikrelekrele.
Isipho soNyaka omnye
Ngaba ujonge iprojekthi ye-DIY? Zama eli phephancwadi lonyaka. Gcwalisa amaphepha ngeenkumbulo ezithandekayo zonyaka wokuqala kunye. Emva koko Nantsi ! Unesakheke esenziwe ngesandla esiya kumbetha kanye kwiimvakalelo. Heck, usenokuyiguqula ibe sisiko lesikhumbuzo. Ivenkile ye-Etsy ithengisa iijenali zokubhiyozela zonke ezona zinto zibalulekileyo.
Ukupapasha uJane Unyaka wethu wokuQala kunye nejenali eyenzelwe wena yefoto, ukusuka kwi- $ 11, Etsy.com
Isipho seminyaka emibini
Okwangoku, uyazi uburharha bakhe kunangaphambili. Ke yenza isilima esincinci ukubhiyozela iminyaka emibini! Eli lihlekayo 'inqanaba lesibini elingavulwanga' imagi liya kumenza ahleke kwisikhumbuzo sakho sesibini.
Uyilo oluphezulu lwaseMelika Inqanaba lesi-2 elingavulelwanga ikomityi yesipho seminyaka emibini, $ 25, Etsy.com
Isipho seminyaka emithathu yokuKhumbula
Nika isithandwa sakho into emnandi kwisipho seminyaka emithathu. Le bhokisi intle yetshokholethi igcina izinto zilula ngomyalezo obalabala 'weminyaka emithathu'. Oko kwathiwa, kukwakho ukhetho lwegolide ukuba uziva unomdla.
Into ethethwa yiPipi Iminyaka emi-3 isipho seminyaka engama-3 yesithandwa, $ 38, Etsy.com
Isipho seminyaka emine yokuKhumbula
Singathini? Izipho ezityiwayo zezinye zezona zipho zihamba phambili kwizipho zamakhwenkwe. M-odole ii-pints ezine ze-ice cream ye-gourmet-enye yonyaka omangalisayo. Uyilo ipakethi eyenzelwe wena Ukubonisa incasa yakho yesiqhelo (kukho iinketho ezingenasimahla zobisi) okanye unamathele kule ngqokelela ikhethiweyo, enothando.
eCreamery Ukuqokelelwa kwesweethearts, $ 70, eCreamery.com
umyeni ulungisa uxanduva lomtshato
Isipho seminyaka emihlanu yokuKhumbula
Iminyaka emihlanu, iinkumbulo ezingenakubalwa. Guqula ezinye zezo nkumbulo zibe kukufanele udonga isipho sefoto isikhumbuzo sesihlanu. Eli gcisa lidibanisa iifoto zakho ozithandayo ezimile kwinombolo yesihlanu. Khuphela ifayile yakho yesiko, uyiprinte, emva koko yibumbe Ngesipho esiyinxalenye yokuthenga, inxalenye ye-DIY.
Imvula ethontsizayo ngu-AE Isipho seminyaka emihlanu sokukhumbula ikholaji yesoka, $ 8, Etsy.com
Isipho seminyaka eli-10 yokuKhumbula
Ukuba iminyaka eli-10 ikufundisile nantoni na, kukuba izinto ezincinci zinokuthetha kakhulu. Le khonkco yesitshixo sokuyila imele kakuhle iminyaka elishumi (elishumi!) Kunye. Ishicilelwe ngegama elithetha konke: '10 phantsi, ngonaphakade. '
IiTrinkets kunye noTyebi beTucker I-10 Phantsi nangonaphakade ukuya kwisipho seminyaka eli-10 yesipho esikwi-dime, ukusuka kwi- $ 22, Etsy.com
Ngaba ujonge izimvo zesikhumbuzo nangakumbi kwisithandwa sakho? Ezi zipho zithandekayo, ezizodwa kunye nezicingelwayo zezona zikhethiweyo zilungileyo nokuba zithini.
Mhlawumbi ukwizazi ngeenkwenkwezi; mhlawumbi uyathandana ongenathemba. Nokuba yeyiphi na indlela, kukho isizathu sokuba esi sipho sibe Etsy umthengisi ogqibelele. Buxabise ubusuku ohlangane nabo okokuqala kunye nokuprintwa kwesibhakabhaka ngala mhla ukhethekileyo.
EtchCraft Imephu yeenkwenkwezi kwisipho sokukhumbula iminyaka, ukusuka kwi- $ 45, Etsy.com
IsiQinisekiso esenzelwe wena
Ukuba uyazixabisa izinto ezintle ebomini, uyakuxabisa esi sipho sonyaka. I-odolo yesiqhelo kuseto lwenkqubo kunye nokuphakamisa ibha yakhe kwangoko.
Izipho eziqhelekileyo zikaGreene I-whisky decanter ebhalwe igama lomntu ebekwe ngamatye, ukusuka kwi- $ 43, Etsy.com
Guqula isipho sakho sibe yinto engalibalekiyo ngoncedo lwe Cameo . Inkonzo ikuvumela ukuba ubhukishe ividiyo ekhwaza kwindumasi yakhe ayithandayo. Ewe, uya kufumana umyalezo owenzelwe wena anokuthi abonise ngawo kubo bonke abahlobo bakhe. Ngoku lelinye isoka elinethamsanqa!
Cameo ukukhwaza, amaxabiso ayahluka, Cameo.com
Bhala ngesandla zonke izizathu zokuba uyamthanda kule ncwadi intle. Iphepha ngalinye linezixhobo zokufumana iiijusi zakho zokuyila-kwaye mhlawumbi ezinye iinyembezi zovuyo-ezihamba. Sisipho esifikelelekayo, esenzelwe wena ukuba asoloko ebambelela kuso.
Nqo nqo Into endiyithandayo ngawe ngencwadi yam, i- $ 10, UncommonGoods.com
I-Succulent ebunjiweyo yentliziyo
Esi sithandwa sithandekayo sisipho esihle kakhulu kumzali wesityalo esihlumayo. Okanye, entwasahlobo yenyanga ukuhanjiswa kwezityalo - Inkqubo inikeza enye yezinto esizithandayo Izipho zokubhaliselwa .
Inkqubo Isityalo sentliziyo seHoya, $ 28, TheSill.com
Amakhwenkwe athandana nawo awoneli ngokwaneleyo kwisipaji sakhe esikhanyayo, esijongeka kakuhle. Ngoba? Kuba incinci, iyawaphuma amakhadi ngonqakrazo lweqhosha, kwaye inegumbi lekhadi lokuzikhethela ukuze angaze aphulukane nezinto zakhe kwakhona.
Ngaphandle Isipaji sePalamente, ukusuka kwi- $ 89, Ekster.com
Ibhiya yeBherrel Bukela
Ukuthetha ngezixhobo zamadoda ezi-snazzy, jonga le wotshi ipholileyo, ifanelekileyo yokujonga ixesha. Iinkuni zifunyenwe kwimiphanda yebhiya ebuyiselweyo ngenkangeleko yohlobo olunye. Lungiselela amaqashiso 'Uyifumene phi loo nto?
Ingqolowa yoqobo IBrewmaster Alterra Chrono 44mm, $ 399, OriginalGrain.com
Uyakubona le vest ithandwayo kuyo yonke indawo ukusuka eofisini ukuya kwiindlela, kwaye unyaka umhle kakhulu. Oko kuthetha ukuba inyanzelekile ukuba ibe sisiseko sewadi yakhe. Ibhonasi: Impahla yangaphandle yenziwe ngokupheleleyo kwizinto ezisetyenzisiweyo.
IPatagonia Ivesti yoboya begusha ebhetele, $ 99, Ukubuyela emva.com
Nyusa umdlalo wakhe we-sneaker ngesibini esitsha sokukhaba. Ezi slip-ons zemihla ngemihla zibonelela ngokuqina kunye nesitayile. ( Ndum : Balwa neenyawo ezinukayo, besithi nje.)
Amawaka angamawaka isiliphu samadoda, $ 120, AmawakaFell.com
Ibhokisi yeZipho eziMiselweyo
Kunye Ukubulisa , Uyila uyilo lwesikhumbuzo senkcubeko esikhoyo kwisoka lakho. Khetha kuluhlu olubanzi lweebhokisi kunye nezipho ezincinci zokuzizalisa. Xa evula iphakheji, uya kutyhila ukumangaliswa (kubandakanya iifoto ezikhethekileyo kunye nomyalezo ngaphakathi).
yintoni yokukrola kumsesane
Ukubulisa isipho, ukusuka $ 13, Greetabl.com
Yothusa fan enkulu yezemidlalo? Phuma YeWadi Wallau indalo eyoyikekayo. Umenzi uthengisa iitoni zeememorabilia ezizodwa, kubandakanya le peni ye-baseball. Ngamnye wenziwa ngezihlalo ezihlanguliweyo zenkundla. Khetha i-MLB ballpark ethetha kakhulu kwisithandwa sakho.
Iwadi yakwaWallau ipeni yesihlalo se-ballpark, ukusuka kwi- $ 160, UncommonGoods.com
Uneposi! Mxelele xa ucinga ngaye ngomyalezo wedijithali ngendlela ebukhali kunesicatshulwa. Esi sixhobo sibonisa amanqaku othando owathumela nge-app ekulula ukuyisebenzisa. Nanini na xa kufika inqaku elitsha, intliziyo ebhokisini ijikeleza. Akumangalisi ukuba yenye yezona zinto sizithandayo izipho ubudlelwane umgama omde .
Ibhokisi yothando umthunywa, $ 100, NgUlObe.nl
Musa ukuhlawula nayiphi na ikhadi lakudala lesithandwa sakho. Siyachukumiseka lolu luyilo lukhuni. Yidibanise nesipho, okanye mayime yodwa.
Emva koko Ikhadi lesikhumbuzo sentliziyo yesoka, ukusuka kwi- $ 15, Etsy.com
Ngaba ujonge isipho esidala? Zama ubucwebe. Le khonkco ityibilikileyo yeyenkwenkwe ethanda ukungunda okungapheliyo.
Ngaphambili ikhonkco ende ende, $ 6,000, Auvere.com
Nika isithandwa sakho indlela yokugcina umkhondo wakho wonke umhla wakho wobusuku obumangalisayo. Le dayari yesitikiti yamvumela ukuba aqokelele iphepha eligcina iikhonsathi, iimyuziyam kunye nokunye. Yithi molo kwiprojekthi entsha, eyonwabisayo onokuyenza kunye.
U-Eric Epstein idayari yetikiti, $ 14, UncommonGoods.com
Ezi zibilo zikhangeleka zidityanisiwe ukuze zibe mnandi. Imibala ekumgangatho oqhelekileyo kunye nokulingana okuthembekileyo kuthetha ukuba zilapho ngokuqinisekileyo intle ngokwaneleyo ukuba inganxitywa yindlu. Luhlobo lwento angazange azi ukuba uyayifuna, kodwa ngekhe afune ukuyikhupha xa sele enazo.
Amazwi angaphandle I-sweatpants yangeCawa, $ 88, Ngaphandle kweeVoices.com
Esi sipho sokukhumbula isoka lakho siya kumnika iswiti, mnandi. Xa ecofa i-reel eyenziwe-y-odolo, uya kufumana ubushushu kunye ne-fuzzies ngaphakathi. Ngokunyaniseka yenye yezona zipho ziyilayo kunye nezothando esithe sahlangana nazo.
Umfanekiso3D Yenza eyakho imbonakalo ye reel, $ 30, UncommonGoods.com
Nasi isipho sokukhumbula ixesha lokuzonwabisa: i-duffel ekhangeleka ipholile ephindwe kabini njengobhaka, ngenxa yemitya efanelekileyo. Owu, kwaye sizikhankanyile zonke iipokotho? Ukuhlolisisa akukaze kube lula.
Everlane Ipakethe yokuhambisa, $ 88, Ngaphezulu
Mthathele ivumba elitsha lokutyikitya eninokulonwabela nobabini. Ewe kunjalo, konke kukhetho, kodwa ngoku sikule vumba likhethekileyo, elinuka kamnandi. Kunuka kamnandi, usenokuzama nokuba ukutshiza okanye ezimbini. Sisipho se-luxe esiya kumenza azive ekhululekile kulo msitho.
Byredo Super Cedar eau de parfum, ukusuka kwi- $ 180, Imvu.com
Awungekhe uhambe gwenxa ngesipho esisebenzayo nesenzelwe wena kwisoka lakho. Esi sikhululo sodidi singabiza ifowuni yakhe kwaye sigcine zonke ezinye izinto eziyimfuneko. Kodwa inkcazo yemonogram yeyona nto iyibeka yodwa ngaphandle kwepakethi.
Indalo yobuqu isikhululo sokutshaja isikhumba, $ 80, UkuBanga
Ukulungele ukuthatha inyathelo elilandelayo kubudlelwane bakho? Phakamisa umbuzo kwisikhumbuzo sakho kwisindululo esiphakamileyo. Le band emnyama yedayimani yenza ukubalasela Umsesane wokuzibandakanya kwamadoda .
UDavid Yurman Ibhendi ehamba phambili eneedayimani ezimnyama, $ 1,200, Imvu.com
izipho zeminyaka ngemveli nezangoku
ilokhwe yomtshato yomtshato wesibini
ngowuphi umnwe owenza umsesane wesithembiso uyaqhubeka
ukuqala kwangoko ukuthumela izimemo zomtshato
umtshato enkosi imiyalezo yamakhadi
izihlalo zokuhombisa umsitho womtshato
ukuba uza kunxiba ntoni emtshatweni wasebusika ka-2018